Tababare Solskjær oo ammaanay Paul Pogba kaddib wacdarihii uu ka sameeyay kulankii Fulham – Gool FM
(Manchester) 21 Jan 2021. Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa ammaanay qaab ciyaareedka xiddigiisa reer France ee Paul Pogba, kaddib wacdarihii uu ka sameeyay kulankii xalay ee Fulham.
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dib ugu soo laabtay hoggaanka horyaalka Premier League kaddib markii ay 1-2 uga soo adkaadeen Fulham oo ay booqdeen.
Paul Pogba ayaa mudooyinkan dambe ku soo bandhigayay qaab ciyaareed qaas ah kooxda Manchester United, isagoo si joogta ah kaga qeyb qaatay 5-tii kulan ugu dambeysay ay ciyaartay kooxda Manchester United, wuxuuna ku guuleysatay inuu dhaliyo 2 gool.
Ole Gunnar Solskjær ayaa kulanka kaddib shir jaraa’id uu ka soo muuqday wuxuu ku sheegay:
“Waxaan mar kasta sheegnaa in Paul Pogba uu sameyn karo wax walba, wuxuu ka ciyaari karaa qadka dhexe, xaga dambe, garbaha, mar walbana wuxuu ku guulaystaa abuurista fursado iyo shuudad.”
“Kulankii Fulham, waxaan dareemeynay in booskiisa uu yahay qadka dhexe, wuxuuna ku dhaliyay gool cajiib ah lugtiisa bidix”.
“Pogba waxa uu leeyahay awood jir ahaaneed oo fiican, wuxuuna ka ciyaari karaa dhamaan boosaska khadka dhexe, tanina waa muhiim, taas oo ka dhigaysa inuu ku haboonaado qaab ciyaareed kasta, wuxuuna soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah kulankii Fulham.”